Xidhiidhka France Oo Khalad Ku Tilmaamay In Difaaca Aymeric Laporte Uu U Ciyaaro Xulka Spain
HomeWararka MaantaXidhiidhka France Oo Khalad Ku Tilmaamay In Difaaca Aymeric Laporte Uu U Ciyaaro Xulka Spain
04/09/2016 Samatar Mohamed
Xidhiidhka kubadda cagta dalka Faransiiska ayaa sheegay inay khalad noqon doonto in Aymeric Laporte uu u wareegsado xulka Spain, laakiin waxa uu qirtay inuu ka fog yahay inuu noqdo doorashadda koowaad ee difaaca.
Jariiradda Marca ayaa sheegtay toddobaadkii hore in tababaraha xulka Spain Julen Lopetegui inay ka dhaadhacsan tahay in Laporte uu u ciyaari karo xulka Spain halkii uu u ciyaari lahaa France, difaaca Athletic Bilbao ayaa qaadan kara dhalshadda Spain maadaama uu asal ahaan ka soo jeedo gobolka Basque.
“Waxaan ka akhriyay wargeys Spanish ah in Laporte uu isku dayayo inuu u ciyaaro Spain, waxaan u rajeynayaa nasiib wacan, laakiin waxaan qabaa inay khalad tahay” ayuu yidhi madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Faransiiska Noel Le Graet oo u waramayay L’Equipe.
Guddoomiye Noel Le Graet ayaa sii raaciyey “Didier Deschamps uma aanu soo yeedhi karin tartankii qaramadda Yurub maadaama uu dhaawac ahaa, inkasta oo uu xilli ciyaareed fiican la qaatay Bilbao. Kuma cadaadin doono Didier inuu soo xusho isaga. Anniga ahaan waa wax aan la qiyaasi karin. Haddii Laporte uu doonayo inuu maaliyad bedesho waa isaga shaqadiisa. Sharciga ayaa u ogolaanaya”.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta France ayaa hadalkiisi ku soo gaba-gabeeyay “Difaacyadeena dhexe waxa ay u dagaalamayaan inay boos joogta ah helaan, halka kuwa kale ay ku jiraan juuniyeerka. Waxaan qabaa in Sakho iyo Mangala inay soo kabsan doonaan, si la mid ah Kurt Zouma”.
“Laporte waa khasab inuu qeyb ka noqdo 8 ama 9 difaac, laakiin inuu yidhaahdo haddii aan la sii soo yeedhin waxaan u ciyaarayaa Spain, markaas isaga ayay u taalaa” ayuu yidhi.